Alaivo Topimaso Ny Fiainana Ao Anatin’ny ‘Japàna Mambabo Maso’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2016 18:10 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Ελληνικά, Italiano, English
Ny Kianja Asakusa ao Tokyo (1922). Loharanon-tsary: Tranombokim-Bahoaka Dizitalin'i Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Tany ampiandohan'ny Janoary, namoaka zavatra dizitaly miisa maherin'ny 180.000 ny Tranombokim-Bahoaka ao New York (NYPL) ho lasa anatin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Natao ho ampiasain'ny rehetra ireo sary, isan'ireny ireo sary miresaka fotsiny toerana iray eto amin'izao tontolo izao tamin'ny taonjato lasa iny na talohany.
Ho an'ireo mpitia Japàna, ny angona ho an'ny daholobe avy amin'ny NYPL dia raki-tsarobidy ahitàna sary an'arivony maro.
Indraindray ilay angona dia mamerina mamoaka boky iray manontolo. Ohatra, asongadin'ilay angona dizitaly ny bokintsary “Sights and Scenes in Fair Japan” (ireo faritra sy toerana ao anatin'i Japàna Mambabo Maso). Novokarina tany amin'ny manodidina ny 1910 ho an'ny Zotran-dalambin'ny Governemanta Imperialy tao Japàna, asongadin'ilay boky ireo sary nolokoina tànana ary nopihan'ilay Japoney mpisava làlana tamin'ny resaka fakàna saripika, Ogawa Kazumasa.
Azo inoana ho toy ny ezaka fampidirana ilay firenena mbola toy ny vaovao tamin'izany fotoana izany mba ho fantatr'ireo mpitsidika isankarazany avy any amin'ny firenena hafa, izay tonga hiasa na nandalo tao Japàna, ilay bokintsary tamin'io fotoana io.
Sarintany ankapobeny misy ny Zotran-dalambin'ny Governemanta tao Japàna. Loharanon-tsary: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Afaka maka endrika toy ny avy any an-tany lavitra any ireo sary nopihan'i Ogawa nampiasainy handraketana ny fiainana tao Japàna nandritry ny faramparan'ny vanim-potoana Victorian sy Edwardian.
Fankafizana ny Fahatonian'ny Tolakandron'ny Lohataona teo amin'ny Kamogawa tao Kyôto. Loharanon-tsary: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Na izany aza, marobe amin'ireo saripika navoaka tao anatin'ny “Sights and Scenes in Fair Japan” no manome tanjona iray sy topimaso mahatalanjona momba ny fiainana tany ampiandohan'ny taonjato faha-20 tao Japàna.
Ny atitrano taminà Toeram-pivarotana Maoderina iray tao Tokyo. Loharanon-tsary: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Amin'ny lafiny sasany, mbola voatahiry nandritry ny an-jato taona mahery taty aoriana ilay Japànan'ny taona 1910. Ny faritra fisindàna ao amorontsirak'i Enoshima, ohatra, izay mikipaka mankany atsimon'i Tokyo sy Yokohama fotsiny, dia mbola azo fantarina aty amin'ny 2016.
Enoshima, Nosy Malaza Fitsangantsanganana Fialantsasatra ao akaikin'i Tokyo. Loharanon-tsary: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Ity ny toejavatra tsy misy hafa amin'izany ao atsimo andrefan'ny Tendrombohitra Fuji:
“七里ガ浜から見た江ノ島と富士山” (Tontolo manodidina ny Tendrombohitra Fuji sy Enoshima jerena avy eny Shirigahama). Loharanon-tsary: mpampiasa Flickr Kazuhiro Tsugita, CC BY-SA 2.
Ireo rakitra Dizitaly natao ho an'ny daholobe avy amin'ny Tranombokim-bahoaka ao New York dia manasongadina an'i Japàna avy aminà loharano hafa ihany koa — ity izao karatra paostaly miloko avy aminà mpakasary tsy fantatra anarana (hatreto aloha farafaharatsiny) ahitàna ny faritr'i Nihonbashi ao Tokyo, nalaina tany amin'ny manodidina ny 1922.
Nihonbashi dori Tokyo. Loharanon-tsary: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Taona iray taty aoriana, ity faritra ity sy ny maro tamin'ireo tavela tao an-drenivohitra Tokyo sy Yokohama no niravona sy may nifotetaka tamin'ny tany noho ilay Horohrontany Goavana Kanto tamin'i 1923.
Na izany aza, mbola mitoetra ampiasaina hatrany ilay tetezam-bato eo afovoan'ilay karatra paostaly miloko, na dia ambany alok'ilay lalambe migodàna mihantona eo ambony aza.
Tetezana Nihonbashi, miaraka amin'ilay lalambe migodàna Shuto azo sary eo amboniny, 2007. Sary tao amin'ny Wikipedia, sehatra ho an'ny dahoobe.
Nitety ny làvany sy ny sàkany tao Japàna ilay mpakasary, Ogawa Kazumasa, nanao ireo andian-tsariny ho an'ny Zotran-dalambin'ny Governemanta Imperialin'i Japàna — ity misy fijery midadasika ny tanànan'i Onomichi, ao amin'ilay ranomasina anatin'i Japàna, eo ivelan'i Hiroshima indrindra.
Peep iray avy ao amin'ny Ranomasina Anatiny, akaikin'i Onomichi. Loharanon-tsary: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Ity no fahitàna ilay tanàna araka izay nahitàna azy tamin'ny 2015.
尾道 おのみち (Onomichi, Hiroshima). Loharanon-tsary: mpampiasa Flickr Toomore Chiang. Sary nampiasàna ny CC BY 2.0.
Mpakasary iray hafa nandeha nankany Nagasaki, any amin'ny faran'izay lavitra indrindra amin'ny andrefan'i Japàna, no nahavita naka sary ny fon'ny Revolisiona Indostrialin'i Meiji.
Ity no sarin'ny toerana famboarana sambo an'ny Mitsubishi tany akaikin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 tany.
Fanamboarana sambon'ny Mitsubishi, Seranan'i Nagasaki. Loharano: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.
Mbola mijoro ao hatrany ilay fitaovana fisintonana enta-mavesatra, miendrika maritòa ny lohany, na dia efa nakisaka niala ny toerana tena nisy azy tany aloha aza.
Ilay fitaovana fisintonana entana mavesatra ao amin'ny Mitsubishi Nagasaki. Loharanon-tsary: Marine-Blue mpampiasa Wikipedia.
Ireny sary ireny, araka ny maha-izy azy, dia manafosafo fotsiny ny tendrony amin'ireo tahiry dizitalin'ny NYPL. Raha toa ianareo mahita zavatra hafa any, iangaviana mba hamela fanamarihana eny anatin'ny fanehoankevitra!
Japàna, ny vahoakany, fanehoana ny habetsahana ara-keviny ny vahoaka (circa 1880) miala avy amin'ny mazava, antonontonony, mankany amin'ny matroka, no betsaka indrindra. Loharano: Tranombokim-bahoaka Dizitaly ao Amerika, sehatra ho an'ny daholobe.